The 10 Kacha Mma ekwentị na July 2021 | Gam akporosis
Top 10 na-arụ ekwentị nke July 2021
Dị ka ọ dị na mbụ, AnTuTu na-enye akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ, kama nke ahụ, ndepụta nke njedebe kachasị ike n'ahịa, ọnwa site n'ọnwa. Ya mere, na ohere ohuru a anyi n’egosiputara gi na onwa June, nke bu nke ikpeazu putara ihe site na akara aka ya ma dakọtara na ọnwa nke July Ka ahụ!
1 Ndị a bụ ndị mobiles kachasị elu nwere arụmọrụ kacha mma nke July
3 Black Shark 4 Pro, ekwentị kachasị ike n'oge a
Ndị a bụ ndị mobiles kachasị elu nwere arụmọrụ kacha mma nke July
E gosipụtara ndepụta a n'oge na-adịbeghị anya, ma, dị ka anyị si pụta ìhè, bụ nke June gara aga, ma ọ na-emetụta maka June ebe ọ bụ akara kachasị elu nke benchmark, yabụ AnTuTu nwere ike inye ntụgharị a na ọkwa ọzọ nke ọnwa a, nke anyị ga-ahụ n'August. Ndị a bụ ndị smartphones kachasị ike taa, dị ka usoro nyocha si dị:
Dịka enwere ike ịkọwapụta na ndepụta ahụ anyị tinye n'elu, na Black Shark 4 Pro na Red Magic 6 Pro bụ anụ ọhịa abụọ ndị dị na ọnọdụ abụọ mbụ, nwere isi 849.822 na 833.276, n’otu n’otu, na onu ogugu enweghi nnukwu onu ogugu n’etiti ha. Igwe ndị a nwere igwe eji agagharị agagharị Qualcomm si Snapdragon 888.
Onye nke atọ, nke anọ na nke ise nwere OnePlus 9 Pro, Oppo Chọta X3 Pro na Vivo X60 Pro +, nke nwere 824.459, 818.689 na 811.808, n’otu n’otu, imechi ebe ise izizi na ndepụta AnTuTu.
N'ikpeazụ, ọkara nke abụọ nke tebụl ahụ bụ iQOO 7 (811.508), OnePlus 9 (810.916), Realme GT (810.141), ROG Phone 5 (808.576) na Xiaomi Mi 11 Ultra (797.379), n'otu usoro ahụ , site na isii ruo nke iri.
N'adịghị ka ndepụta mbụ akọwapụtara, nke naanị Snapdragon 888 processor chipset na-achịkwa, ndepụta nke taa 10 kachasị n'etiti ekwentị nwere arụmọrụ kacha mma maka July 2021 site na AnTuTu nwere smartphones na ndị na-arụ ọrụ MediaTek., Kirin na, n'ezie, Kwadoro. Samsung's Exynos, dịka na mbipụta ndị gara aga, enweghị ebe a ga-ahụ n'oge a.
Mgbe Xiaomi Mi 11 Lite 5G, nke jisiri ike gosipụta ọnụ ọgụgụ dị elu nke 531.531 ma na-akwado Mediatek's Dimensity 820, Honor 50 Pro, nke Snapdragon 778G na-akwado, nọ n'ọnọdụ nke abụọ, yana akara nke 513.422 . Nke a na-esote Honor 50, yana akara nke 505.028. Nke ikpeazụ a na - arụ ọrụ na Snapdragon 778G.
Oppo Reno6 5G, Realme Q3 Pro na Redmi 10X 5G nwetara ọnọdụ nke anọ, nke ise na nke isiin’otu n’otu, nke nwere ọnụọgụ nke 481.288, 452.616 na 452.596. IQOO Z3 nọ n'ọnọdụ nke asaa, jiri akara nke 445.827 isi.
Huawei Nova 8 Pro na Nova 8 nọ n'ọnọdụ nke asatọ na nke itoolu, na 438.936 na 435.681, n'otu n'otu. Onye mbu bu ama nke ejiri Kirin 985 di ike, ebe nke ikpeazu kwuru na on Chip. Ihe Huawei Nova 7, na Kirin 985 na ihe 435.306 a na-enweghị ike icheta echepụtara na nyocha ahụ, ọ bụ smartphone ikpeazụ na ndepụta AnTuTu.
Di iche iche nke chipsets nke anyị na-ahụ na ndepụta a pụtara ìhè, ọ bụ ezie na nke a anaghị agụnye ụdị Exynos, mana nke a bụrịrị ihe Samsung, ebe ọ bụ na ọ bụghị asọmpi na mpaghara a, na arụmọrụ na ike. Nke a na - eme mgbe Mediatek na Huawei, tinyere Kirin ha, hapụrụ Qualcomm na ndepụta ndị gara aga. Ugbua onye na-emepụta ihe nke America tinyere batrị ogologo oge gara aga ma jisie ike tinye ọtụtụ chipsets na elu a, na-ahapụ otu n'ime ya na mbụ.
Black Shark 4 Pro, ekwentị kachasị ike n'oge a
Iji nye ya nkwanye ugwu kwesịrị ya, anyị ga-ekwu maka njirimara na nkọwa teknụzụ nke ekwentị kachasị ike nke oge a, dị ka elu nke nwere arụmọrụ kacha mma ruo afọ a.
Black Shark 4 Pro bụ ngwaọrụ egwuregwu nke na-abịa na ihuenyo Super AMOLED 6.67 inch nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,400 x 1,080 yana usoro ngosipụta 20: 9. Ngosipụta a nwere oke ume ọhụrụ 144Hz, nkwado HDR10 maka ịcha ọcha na agba dị mma, yana ncha kacha nke nits 1,300.
Banyere processor gị, na -eji Qualcomm's Snapdragon 888, chipset na -ebi n'obi ya ma nwee ike iru oke elekere nke 2.84 GHz. Mpekere a na -esonye na Adreno 660 GPU. Na mgbakwunye, a na -egosi ngwaọrụ ahụ n'ọtụtụ nsụgharị, nke nwere ike ịbụ 8, 12 ma ọ bụ 16 GB na 256 ma ọ bụ 512 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. N'ezie, enweghị nkwado maka kaadị microSD, yabụ na ọdụ ụgbọ ala a enweghị mgbasawanye ebe nchekwa ROM.
N'aka nke ọzọ, Xiaomi's Black Shark 4 Pro nwere sistemụ igwefoto n'azụ nwere okpukpu atọ isi modul 64 MP nwere oghere f / 1.8, ihe mmetụta 8 MP nke abụọ nwere oghere f / 2.2 na onye na -agba egbe ikpeazụ nke 2 MP na oghere f / 2.4 maka foto nnukwu. N'aka nke ya, ọ na -enye igwefoto n'ihu 20 MP nwere oghere f / 2.5 n'ime oghere dị na ihuenyo nke dị na akụkụ etiti ihuenyo ahụ.
Batrị nke ọnụ a bụ Ike 4,500 mAh ma na -akwado teknụzụ ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa 120 W. Site na nke a, ekwentị nwere ike ịkwụ ụgwọ 50% n'ime naanị nkeji ise yana 5% n'ihe dị ka nkeji iri na ise. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a bụ otu n'ime ọmarịcha ya na, n'otu oge ahụ, atụmatụ na -atọ ụtọ.
Akụkụ ndị ọzọ gụnyere usoro jụrụ oyi, onye na-agụ akara mkpisi aka n'akụkụ, Android 11 n'okpuru MIUI 12.5, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Bluetooth 5.2, NFC maka ịkwụ ụgwọ na-enweghị kọntaktị (enweghị kọntaktị), ntinye jack maka 3.5 maka ekweisi na stereo. ndị na -ekwu okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Top 10 na-arụ ekwentị nke July 2021
Ihe ngwugwu komputa asaa kacha mma maka gam akporo
Ngwa igwe 6 kachasị mma na ala ọma jijiji maka gam akporo